Galaxy Watch Active, mamakafaka ny famantaranandro mora vidy avy amin'ny Samsung | Androidsis
Miguel Hernandez | | About us, hevitra, SmartWatch
Ny famantaranandro Smart dia mbola filohan'ny orinasa marobe toa an'i Samsung, Huawei ary Apple, na dia eo aza ny zava-misy iray ihany no malaza be. Angamba izany no mahatonga ny orinasa manohy miloka amin'ny fandefasana tsy tapaka fifandimbiasana vaovao eny an-tsena, izany no ohatra amin'izany Samsung Galaxy Watch Active.
Fotoana izao hanitsiana kely ny vidiny ho an'ny vokatra iray izay tsy mahavita ny fanitarana indrindra noho io antony io, ary izany dia sahala amin'ny smartphone finday avo lenta no vidin'izy ireo. Eo am-pelatanantsika sy eo amin'ny tanantsika ny Samsung Galaxy Watch Active vaovao, mijanona miaraka aminay ary manao famakafakana henjana izahay.
Toy ny mahazatra, ny fandinihanay dia handeha amin'ny alàlan'ny lafin-javatra mifandraika indrindra amin'ny haavon'ny fitaovana, ny famolavolana, ny fampifandraisan'ny mpampiasa ary ambonin'izay rehetra niainana nomen'ny fampiasana azy. Ho an'ity dia azonao atao ny manantona mivantana ny sehatra teknika izay mahaliana anao indrindra. Raha tianao ny mahita ny fomba fiheviny sy ny fiarahany aminay amin'ny fomba mahafinaritra kokoa, dia manana ny famakafakana video izahay miaraka amin'ny mpiara-miasa Androidsis navelanay ho lohan'ity lahatsoratra ity, ka andao isika hankany, fantaro ny Samsung Galaxy Watch Active, ny safidy "mora" amin'ny Apple Watch. Raha tsy te hieritreritra momba azy intsony ianao dia afaka mividy azy amin'ity rohy ity dia 199 euro ihany.
1 Volavola sy fitaovana: Samsung manatsotra ny famantaranandronao
2 Rafitra tadidy sy fampiasa amin'ny mpampiasa: Tsy misy paiso mihodina
3 Toetra sy fitaovana teknika
Volavola sy fitaovana: Samsung manatsotra ny famantaranandronao
Samsung dia manolo-tena amin'ny fitohizany amin'ny fanomezana antsika famantaranandro boribory tanteraka, satria hatramin'ny nanombohany ary mazava izany no mampiavaka azy amin'ny fifaninanana (Apple Watch). Hitanay ny aliminioma ao amin'ny bezel, vera nohamafisin'ny 2.5D ho an'ny eo aloha ary toy ny mahazatra ao amin'ny sehatry ny Watch, polycarbonate ho any aoriana izay ahitantsika ireo sensor mitovy aminy. Ny haben'ny sehatra dia mitovy amin'ny efijery 1,1 santimetatra, manokana kokoa28.1 milimetatra amin'ny manodidina azy ary hanana bokotra roa ihany isika eo amin'ny ilany ankavanana,hahafahantsika mifandray amin'ny famantaranandro mihoatra ny interface interface.
Dimensions:39.5 X 39.5 X 10.5mm
habeDial diameter: 28.1 mm
Raha fintinina dia mahita vitsivitsy isika refin'ny 39.5 x 39.5 x 10.5mmmiaraka amin'ny lanjan'ny 25 grama, ary raha misy zavatra azo ampifandraisina amin'ity Galaxy Watch Active ity dia ny hazavany ihany. Azonao atao ny mahazo azy any Espana amin'ny loko maitso, mainty, mavokely ary volafotsy, loko misy loko izay tena tsy ratsy velively.Amin'ny tranga misy antsika dia manandrana ny singa maitso izay manaitra tokoa izahay, saingy tsy mety amin'ny besinimaro mitaky zavatra matotra kokoa, raha izany dia tena atoroko ny kinova mainty sy volafotsy.
Rafitra tadidy sy fampiasa amin'ny mpampiasa: Tsy misy paiso mihodina
Ny iray amin'ireo marika mampiavaka ny katalaogin'i Galaxy Watch an'ny Samsung dia ny bezel mihodina, zavatra ahafahanao mivezivezy amin'ny interface user fa tsy mikasika ny efijery, ary izany dia ilay tabilao, mazava ho azy, lasa mankaleo amin'ny fotoana maro rehefa jerena ny habeny sy refy. Hitanay ny efijery 1,1-inch ary bokotra boribory roa eo amin'ny sisiny hamakivakiana ny TizenOS.
Ireo fehin-kibo dia faritra iray tena mamaritra ihany koa, tianay ny manova azy matetika ary tsy hoe satria tapaka ireny, fa koa satria manova ny fomba fanaontsika. Ity Galaxy Watch Active ity ampiasao ny rafitra fitehirizana manara-penitra sy manerantany, izany hoe ho afaka hampiasa karazan-tady rehetra ianaoa, ary tsy hijanona amin'ireo izay atolotry ny Samsung ao anaty katalaoginy fotsiny ianao mihoatra ny 30 euro. Azonao atao ny misafidy metaly, silikaola, nylon ... miankina aminao izany ary izay rehetra atolotry ny fivarotana toa an'i Amazon dia azonao, na eo aza ny zava-misy fa ny fonosana dia misy tadin-tsolika mahazatra, izay ankasitrahana indrindra rehefa resaka fanatanjahantena.
Samsung dia manapa-kevitra ny hidina amin'ny tany mafy, noho izany dia manome antsika fifandraisana Bluetooth 4.2 angovo ambany(malahelo izahay fa efa nampiasa ny kinova 5.0) ary 802.11bgn WiFi amin'ny tarika 2,4 GHz.Amin'ny ambaratonga fisehoan-javatra mifanentana dia tsy maintsy lazaintsika amin'ny fomba malaza fa afaka mandoa izany isika, nanomboka teomanana fifandraisana NFC izahayary hamela izany hetsika rehetra mifanaraka amin'izany. Natao ho an'ny fanatanjahan-tena izy io, ka mety tsy ho hita GPS, haingam-pandeha, barometatra, gyroscope, mpamaky ny tahan'ny fo ary mpamantatra hazavana manodidina.
Amin'ny ambaratonga finday fotsiny no hananantsika RAM 700 MB, miaraka amina processeur roa-core, ary 4 GB fitehirizana anatiny izay hijanona amin'ny 1,5 GB raha vantany vao tafapetraka ny rafitra fiasa,ampy ho an'ny ady fampiharana tsara ao anaty magazay OS Tizen,saingy tsy ampy raha mikasa ny hitahiry karazana atiny hafa toa ny mozika na Podcasts ianao. Tsarovy fa manana isika tontonana SuperAMOLED 1,1 mirefy manolotra vahaolana amin'ny 360 x 360 tebokaary a Bateria 230 mAheo amin'ny tsipika famantaranandro hafa. Kely hanasongadinana ny haavon'ny fitaovana, izay tsy hanadinoantsika na inona na inona. Tsy tokony hohadinointsika fa manana izany isika mikrôhandidy valiny ary Fanamarinana IP68 manohitra ny rano sy ny vovoka, manohana hatramin'ny ATM 5 (izany hoe azonao atao milentika ao anatiny ary mandro miaraka aminy).
Mila miaiky aho fa tiako izany Ity Galaxy Watch Active ity dia manana rafitra fikirakirana tsy misy tariby izay manana ny Qi standardary ahafahanao manararaotra ny fiasa maro amin'ny fitaovana hafa toy ny famerenana amin'ny laoniny tsy misy tariby finday sasany. Miankina amin'ny fampiasantsika ny fahaleovan-tena, saingy tsy maintsy mazava ianao fa raha mampiasa ny GPS sy ny maso ny tahan'ny fo ianao dia tsy ho vitanao ny roa andro, noho izany tsy maintsy handoa izany isan-kariva ianao.Ny zavatra niainantsika tamin'ny hazakazaka am-bisikileta sy hazakazaka am-bisikileta dia nazava tsara taminay, mila ampandoavinao isan'andro izany ary izany angamba no antony ratsy lehibe.
Mikasika ny traikefa fampiasana dia nahita famakiana marina teo amin'ny tahan'ny tahan'ny fo izahay ary manome amin-kitsimpo izay rehetra atolony anay, Ny Tizen OS dia voaporofo fa rafitra fandefasana solvent fotsinyho an'ny famantaranandro ary tsy nahita vato misakana mijery azy izahay, zavatra iray izay tsy azo lazaina amin'ny Wear OS. Amin'ny haavon'ny famolavolana sy ergonomika ny famantaranandro dia saika fahombiazana tanteraka,ny zavatra tsotra indraindray dia ny manintona ny saina indrindra, tiako manokana io mihoatra ny Galaxy Watch amin'ny kinova mahazatra.
Volavola tsotra nefa mahomby, miaraka amina paleta miloko tsara sy fehy manerantany
Ny Tizen OS dia miasa tsara ary azo ovaina
Fiampangana Qi mahazatra
Ny tena tiako indrindra momba izany dia ny rafitra fiampangana, ary koa ny zava-misyny efijery dia toa mahatalanjona amin'ny toe-javatra rehetra,amin'ity Samsung ity dia miavaka amin'ny fampiasana ny tontonana manokana. Ho fanampin'izany, Tizen OS dia azo ovaina be ary ny interface-ny dia manasa anao hanao an'izany, raha ny marina. Sarotra amiko ny mamihina azy amin'ny "famantaranandro mora vidy" an'i Samsung satria mendrika bebe kokoa izy io.
Ny fizakan-tena dia mety handanjalanja ilay fitaovana
Malahelo fahatsiarovana anaty kokoa aho
Maninona raha mampiasa Blueooth 5.0?
Izay misy an'io Galaxy Watch Active io dia miharihary amin'ny fizakan-tena,Ny famantaranandro dia tsy maintsy andoavana isan-kariva, na inona na inona ampiasanao azy, satria ny bateria sisa tavela, ny tsy firaharahiana ireo fiasa toa ny GPS na ny sensor amin'ny tahan'ny fo, dia tsy hamela antsika handrakotra andro hafa. Afaka mahazo izany ianao amin'ny 199,99 amin'ny Amazon,Afaka mahazo izany ianao amin'ny 199,99 amin'ny Amazon,famantaranandro tena atolotra omena azy ny fiasa sy ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Galaxy Watch Active, manadihady ny famantaranandro azo alain'i Samsung izahay